China Inodzorerwazve Side Gusset Pouches fekitori uye vanotengesa | NEMANGWANA
Inogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches.Iyo gusset inogadzira kuwedzera kwakadzika uye kugona kwechigadzirwa. Rongedza rinogona kuumba bhata repasi. Mativi mana anopa yakasimba chigadzirwa yekumaka mikana.
Yedu yazvino sarudzo inosanganisira isiri-chipingamupinyi uye chipingamupinyi Simuka homwe ine zvinotevera mabhenefiti:
Yakanakisa chipingamupinyi kune hunyoro multilayer chimiro
FDA chigadzirwa chinoenderana nechero chekudya chakanangana
Inosanganisira 5 chiteshi inonzwika-inonzwika yekukiya zipi
Inokodzera How2Recycle® Chengetera Drop-off label
Inogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches.Chimiro chakasimbiswa chequad chisimbiso bhegi chinoita kuti chionekwe chinofadza pamashefu ezvitoro.
Kurutivi gusset homwe dzakashomeka kunge bhokisi-rakaumbwa, zvinoreva kuti vanowanzo tora nzvimbo shoma pasherufu. Aya mabhegi ari sarudzo inozivikanwa ye pasi kana kuzadza bhinzi kofi uye kuputira nati. Rutivi gusset rakawedzerwa mushure mekuzadzwa nezvinhu, riite kuti rimire rakamira pasherefu. Gomba rekurembera zvakare chinhu chakanaka chemuhomwe idzi kuti uwane mamwe masherufu ekuratidzira musupamaketi. Iyo ine yakanakisa kugona yekuzadza zvinhu uye hombe yekudhinda pamusoro.
Rinogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches pamwe anonyanya kushandiswa kuputira tudyo uye zvinhu zvakaoma senzungu, makuki uye bhinzi bhinzi. Asi aya mabhegi anoita zvakare makuru ekupakira mhinduro yezvikafu zvakaomeswa uye zvigadzirwa zvekunaka. Kugadzikika uye zvetsika maficha anowanikwa nedivi redu gusset mabhegi anopa mamwe maitiro akasarudzika ekutsigira ane mukurumbira muenzaniso wakaiswa neyako brand.
Zvigadziriswe zvine mativi zviviri zvinowedzera bhegi rekuzadza vhoriyamu iyo inobvumidza homwe kubata zvimwe zvigadzirwa uye huremu. Izvi zvakare zvinowedzera kuwedzera kuchinjika kana uchibata nezvigadzirwa zvihombe kana zvisina kujairika.
Kubviswa kwemipendero yakapinza, kunopa zvirinani kushandiswa kwevatengi.
Yakaderedzwa Gusset / Imwe Lip - inopa zvirinani pasherufu mharidzo pane yakazara yakavhurika gusset, zvakare inogonesa akasiyana ekuvhara kuti avepo.
Inogonesa mutengi kuvhura rongedza pasina kushandisa chigero.
Itsvo isina kukwana-Yekufambisa zviri nyore kwechigadzirwa.
Nekuvharwa kwepamberi zvinoita kuti vatengi vatoreruke kuvhura nekuvhara mafomati makuru, iine tamper yakajeka track.
Mukati mehomwe imwechete, iwe unogona kuve nezvakasiyana zvimiro zve laminate, zvekuita, dhizaini uye kugona kuve neyakagadzirwa chigadzirwa.
Zvizoro uye Kuchengeta Kwemunhu
Maindasitiri & Kumwe kupakata
Snacks, Nuts uye Trail Sanganisa
Pashure: Recyclable kavha Firimu
Zvadaro: Zvigadziriswazve Simuka Homwe
Akaumbwa muhomwe / Akaumbwa muhomwe echikafu package ...
Kurutivi gusset & Quad chisimbiso homwe
Chengetera Kudonhedza-Kudzorerwazve Mabhegi